उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनी ! - Thulo khabar
उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनी !
काठमाडौ : आकाशमा ‘हामी पनि उड्छौं सपना’ले नै सन् १९०३ मा साकार भएरै छाड्यो। ‘नवीनतम् सोचले भविष्य बदल्न सकिन्छ’ भन्ने भारतीय वैज्ञानिक एपिजे अब्दुल कलामको धारणा त सन् १९०३ मै पुष्टि भइसकेको थियो। एउटै कोखबाट जन्मेका दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सोच पनि एकै भने संयोगमात्र हुने गर्छ।
बुद्ध एयरमा कार्यरत एरोनेटिकल इञ्जि’नियर सुमित र सुम्निमा सँगै कार्यालय जान्छन्, सँगै काम गर्छन्, एउटै काम अनि एउटै कम्पनीमा। पहिलो त सोच मिलेर नै हो, एउटै फिल्डमा सँगै काम गर्दा दुबै जना फुरूङ्ग छन्। ‘दाजुले एउटा विषय रोजे भाइबहिनीले अर्कै फिल्डको विषय रोजेका उदाहरण प्रशस्तै छन्,’
सुम्निमाले भनिन्, ‘तर, हामी दाजुबहिनीमा त्यस्तो छैन, हामीले सल्लाहले नै एरोनेटिकल इञ्जिनियरिङ पढेका हौँ।’ बाल्यकालदेखि दुबैको सोच एरोनेटिकल इञ्जिनियरिङ गर्ने नै थियो। आकाशमा हवाईजहाज उड्दा पनि उनीहरूलाई ‘यो कसरी उड्छ होला’ भन्ने खुुल्दु’ली लाग्थ्यो रे।
त्यही क्रममा उनीहरूले हवाईजहाज पनि बनाए, एडिएएलएन सिस्टम। साधारण भाषामा भन्दा नमूना हवाइजहाज। ‘सबैले बनाए पनि केही विद्यार्थीको मात्रै उड्यो,’ अध्ययन गर्दाको क्षण सम्झिँदै सुम्निमाले भनिन्, ‘त्यो दिन मलाई निकै ठूलो सफलता हासिल गरेजस्तो लागेको थियो।’ बाल्यकालमा विभिन्न आकारका र विभिन्न साइजका जहाज बनाएर उडाएको भन्दा पनि आनन्दको अनुभूति उनलाई भएको थियो।
तर, हवाईजहाजकै वास्तविक आधारमा नमूना विमान बनाएर उडाएको चाहिँ सुम्निमाको यो पहिलोपटक थियो। हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा दुबै दाजुबहिनीको ध्यान ककपिटमा हुने गर्दथ्यो।